Ahoana ny fampiasana Discord amin'ny Xbox One? - Lalao
Discord amin'izao fotoana izao dia manolo ny fanamboarana mic mahazatra amin'ny lalao. Satria afaka miditra amin'ny serivera ianao, mihaino mozika, ary mihomehy aza amin'ny meme tsara, Discord no safidy tsara kokoa ho an'ny mpilalao. Na izany aza, an-taonany maro ny Gamer console dia mahita fomba hahazoana Discord amin'ny rafitr'izy ireo. Amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ny fomba fametrahana Discord amin'ny XBOX One izahay.
Xbox One miaraka amin'ny Discord?
Na dia fitaovana mety amin'ny serasera aza i Discord, dia tsy voatery hampiasa azy io ianao. Ny mikitroka ao anaty lalao ho an'ny Xbox iray dia tena manohana ary tsy mandray an'io habaka 'fanampiny' io amin'ny Xbox anao.
Araka ny fantatsika rehetra, ny console Xbox dia natao ho an'ny filalaovana fotsiny; amin'ny alàlan'ny sideloading, fampiharana iray goavambe toa ny Discord no hanelingelina ny zava-bitanao Xbox. Misy antony tsy avelan'ny mpamorona rindrambaiko antoko fahatelo toy izany. Ankoatr'izay, ny maody fety dia tohanan'ny Xbox, ary efa manana ny fomba tsara indrindra hifandraisana amin'ireo namanao izy. Miaraka amin'ireo dingana tafiditra ao amin'ny lahatsoratray, afaka misehoseho mora foana amin'ny namanao ianao ireo exclusives rehetra izay lalaovinao. Ny olana amin'ny fifandraisana dia azo vahana mora amin'ny fomban'ny antoko patanty Xbox.
Lahatsoratra farany:Fantatrao ve? Nintendo Switch 2 hanomboka amin'ny fiandohan'ny 2021.
Dingana tokony hametrahana Discord amin'ny XBOX One:
Midira amin'ny kaonty mivantana Xbox anao.
Mandehana any amin'ny vakizoro system, izay hita eo amin'ny ilany ankavanana. Mizaha amin'ny safidin'ny kaonty ary fidio ireo kaonty sosialy mifandraika.
Afaka mahita famantarana Discord mijoro eo ankavananao ianao, mivezivezy eo, ary kitiho ny rohy. Atombohy ny fizotranao ary ampifandraiso amin'ny Discord ny kaontinao Microsoft.
Ity dia iray amin'ireo dingana manakiana indrindra; kaody enina isa no haseho eo amin'ny efijery. Sokafy ny fampiharana Discord amin'ny telefaona / pc anao, ary mandehana amin'ny toe-javatra.
Mandehana mankany amin'ny fanangonana izao, avy eo mivezivezy mankany amin'ny Xbox live ary ampidiro ny kaody amin'ny efijery izay alain'ny Discords anao.
Amin'ny fanaovana an'io izao, ny kaonty Xbox dia nampifandraisina taminao Kaonty Microsoft . Ho hitan'ny namanao fotsiny anefa izay lalaovinao. Mety ho vahaolana ampahany io, saingy indrisy, izy irery ihany no misy amin'izao fotoana izao.
1Q. Ahoana ny fampifandraisana ny Xbox iray amin'ny Discord?
taona:Raha fintinina dia mila mitandrina dingana telo mora ianao, miditra amin'ny kaontinao Microsoft, manomboka ny fomba fampifandraisana ny kaontinao Xbox amin'ny Discord amin'ny console, ampidiro ny kaody enina amin'ny Mobile / Tablet / PC anao. Manana famintinana kely ireo dingana ianao fa vakio ny lahatsoratra iray manontolo mba hialana amin'ny lesoka rehetra.
2Q. Mendrika ve ny mampifandray?
Raha laharam-pahamehana ny fampisehoana ny namanao izay lalaovinao dia mendrika izany. Ho azon'izy ireo tsara ny zavatra lalaovinao fa tsy hifandray aminao. Ny hany fitaovam-pifandraisana dia amin'ny alàlan'ny mic ao anaty lalao.
Ho famaranana, tsy misy ratsy ny mampifandray ny Xbox amin'ny Discord. Tsotra ihany, na izany aza, amin'ny lafiny iray, ary ny serivisy ihany no azonao ampiasaina amin'ny ampahany. Ka ny fampifandraisana ny kaontinao dia tombony ihany. Araka ny voalaza tetsy ambony dia tianao haseho ny namanao izay lalao lalaovinao. Manantena izahay fa nanome fanazavana mazava momba ny fomba fametrahana Discord amin'ny Xbox ny lahatsoratray. Raha nahomby tamin'ny fametrahana Discord tamin'ny Xbox ianao dia manaova hevitra vitsivitsy ao amin'ny boaty fanehoan-kevitra etsy ambany.
Ahoana ny fomba ahazoana kaody mivantana Xbox?
Efa nahita 90 Day Fiancé the Other Way Season 3 ve ianao?
afaka mampiasa kaonty netflix sasany aho
famoahana vaovao mivantana sarimihetsika maimaim-poana
milalao lalao android amin'ny windows
ps miampy fanavotana code generator
jereo ny sarimihetsika maimaim-poana amin'ny Internet feno
xbox volamena mivantana maimaim-poana tsy misy fanadihadiana